माथिल्लो तामाकोशी : अन्तिम चरणमा कहाँ रोकिएको छ ४५६ मेगावाटको विद्युत् आयोजना ?
बाँकी रहेको थोरै काम सम्पन्न गर्न कति समय लाग्ने हो ठ्याक्कै भन्न सकिने अवस्था छैन । कारण आयोजनाको सबैभन्दा जटिल मानिएको दुईवटा ठाडो सुरुङमा पाइप जडान गर्ने कार्यले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन ।
सोही कारण स्वदेशी लगानीमा निर्माण भइरहेको ४५६ मेगावाटको आयोजनामा समस्या देखिएको छ ।
हालसम्म आयोजनाको ठाडो सुरुङमा ३५५ मिटर पेनस्टक पाइप जडान गरिएको छ । पाइप जडानका लागि सबैभन्दा जटिल मानिएको तल्लो ठाडो सुरुङमा २२० मिटर र माथिल्लो ठाडो सुरुङमा १३५ मिटर पेनस्टक पाइप जडान गरिएको हो ।
माथिल्लो र तल्लो ठाडो सुरुङमा १० मिटरका दुई पाइप जडान गर्न क्रमशः सात र पाँच दिनको समयमा आइसकेको छ । तर असाध्यै जटिल मानिएको ठाडो सुरुङमा पाइप जडान गर्दा क्रेनको डोरी चुँढ्ने जस्ता समस्या पनि देखिने गरेका छन् ।
आयोजनाका अनुसार कुनै प्राविधिक समस्या नआएमा आगामी वैशाखभित्रमा पाइप जडान भइसक्नेछ । त्यसपछि माथिल्लो र तल्लो ठाडो सुरुङको बीचमा रहेको तेर्सो भागमा पाइप जडान शुरू हुनेछ ।
कार्यकारी निर्देशक घिसिङले अगामी असारभित्र कम्तिमा पनि एउटा युनिटबाट विद्युत् उत्पादन गर्ने कार्यतालिका अनुसार काम गर्न पुनःनिर्देशन दिएको आयोजनाका प्रवक्ता डा. गणेश न्यौपानेको भनाइ छ । पहिलो युनिटबाट कूल ७६ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
कार्यकारी निर्देशक घिसिङले कार्यतालिका बनाइ त्यसअनुसार व्यवस्थापनमा सुधार गरी कार्यसम्पादन गर्न पुनःआग्रह गरेका छन् । आयोजनाको तयारीअनुसार पहिलो युनिटबाट विद्युत् शुरू भएपछि बाँकी पाँच युनिटबाट क्रमैसँग विद्युत् उत्पादन हुनेछ ।
उनले आवश्यक समन्वय, सहयोग र सहजीकरण गर्न प्राधिकरण र आयोजना सधैं तयार रहेको बताएका थिए । उनले लट नं २ को ठेकेदारले पनि विगतमा भन्दा काममा केही सुधार गरेको छ । पेनस्टक पाइप आपूर्ति तथा जडानको (लट २) ठेक्का पाएको भारतीय कम्पनी टेक्स्म्याकाले काम गर्न ढिलाइ गरेपछि तल्लो ठाडो सुरुङमा पाइप जडानको जिम्मा इलेक्ट्रोमेकानिकल (लट ३) को ठेकदार अष्ट्रियन कम्पनी एन्ड्रिज हाइड्रोलाई दिइएको छ ।
अपर तामाकोशी हाइड्रोपावर लिमिटेड, टेक्सम्याको र एन्ड्रिजबीच २०७५ को पुस २३ मा आयोजनालाई थप वित्तीय भार नपर्ने गरी यो काम गर्न त्रिपक्षीय सम्झौता भएको थियो । माथिल्लो ठाडो सुरुङमा पाइप जडान भने टेक्स्म्याकोले नै गरिरहेको छ । कार्यकारी निर्देशक घिसिङले आयोजनास्थलबाटै भारतमा रहेका टेक्स्म्याकोका प्रमुखलाई फोन गरी निर्माणमा ढिलाइ नगरिदिन आग्रह गगरेका थिए ।
केही महिनाअघि ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ सचिव दिनेशकुमार घिमिरे, कार्यकारी निर्देशक घिसिङ, माथिल्लो तामाकोशी हाइड्रोपावर लिमिटेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विज्ञानप्रसाद श्रेष्ठसहितको टोलीले कलकत्तास्थित टेक्स्म्याको मुख्यालय गई कम्पनीको उच्च व्यवस्थापनलाई भेटी निर्माण कार्यलाई थप गति दिन आग्रह गरेको थियो । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्रेष्ठका अनुसार, सिभिल कार्यअन्तर्गत मुख्य सुरुङमा ग्राउटिङ र कङ्क्रिटिङ गर्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । मुख्य सुरुङमा जाने प्रवेश सुरुङमा गेट राख्ने तयारी भइरहेको छ ।
गोरखा भूकम्प र त्यसपछिका परकम्पन एवं बाढीपहिराले पुर्‍याएको क्षति तथा अवरोध, मधेश आन्दोलनका कारण निर्माण समग्री ढुवानी र इन्धन आपूर्तिमा आएको समस्या, डिजाइन परिवर्तन, हाइड्रोमेकानिकल (लट २) ठेकेदारको कमजोर कार्यसम्पादन लगायतले आयोजनाको निर्माण ढिलाइ भएको थियो । रमेश लम्साल/रासस
१०४ अंकसहित हुन्डाई आई २० ले जित्यो ‘इन्डियन कार अ...
इन्स्टिच्युट अफ अटोमोटिभ इन्जिनियर्स नेपालको अध्यक्षमा...
निजी क्षेत्रमार्फत द्रूत आर्थिक विकास सम्भवः ढकाल